Tag: b2b nuxurka | Martech Zone
Kooxda Dhaqaalayahannada waxay sameeyeen sahan buuxa iyo falanqeyn ku saabsan dabeecadaha B2B waxayna soo saareen macluumaadkan natiijooyinka. Su'aal kasta, waxaa jira isbarbardhiga halyeeyada ganacsiga iyo jiilka xiga ee iibsadayaasha ganacsiga. Waa wax xiiso leh in la arko farqiga weyn ee u dhexeeya labada. Dib-u-eegista nusqaamaha, waxaa jira kala duwanaansho soo jiidasho leh oo Ruug-caddaayaasha Ganacsiga ah waxay ka helaan warbixinnada cilmi-baarista waxtar badan 35%! Halyeeyada ganacsiga, ugu yaraan 26%, waxay ku qaataan ugu yaraan afar
Istaraatijiyadaha Suuqgeynta B2B ee 2013 iyo wixii ka dambeeya
Axad, Agoosto 11, 2013 Sabti, Agoosto 10, 2013 Douglas Karr
Markii aan la hadlayno shirkadaha u adeega macaamiisha, waxay had iyo jeer weydiiyaan haddii aan la shaqeynay wax shirkado B2C ah. Markii aan la hadlayno shirkadaha B2B, waxay ku weydiiyaan haddii aan la shaqeynay shirkadaha B2B. Daacadnimo dhan, istiraatiijiyaduhu waa isku mid… waa lambarradooda iyo habka wax iibsiga ee ku kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa kala duwanaanshaha faa'iidada iibsi kasta. Shirkadaha B2C waxay u janjeeraan jihada qiyaaso aad u sarreeya iyo dakhli yar oo iibsi kasta
Sabtida, Janaayo 2, 2010 Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan ka shaqeynayaa soo bandhigida shirka Webtrends Engage. Mawduucaygu waa mid gaar ah oo waqtiga la qabanayaa aad u kooban yahay (10 daqiiqo), markaa way igu adag tahay inaan sameeyo hal bandhig oo bandhig ah! Waxaa lay weydiistey inaan lahadlo Blogging-ka guuleysta ee B2B. Waxaan cariiriyey furayaasha Ganacsiga Ganacsiga Blogging ilaa 5 xeelado oo kala duwan oo loogu talagalay soo bandhigida: Hore u joog Kuma filna in wax la qoro, waa inaad ku jirtaa gudaha